Marcus Mariota suffered quad injury that affected mobility against New England Patriots – Sports News 9
FOXBOROUGH, Mass. — Quarterback Marcus Mariota‘s mobility was limited for much of the Tennessee Titans‘ 35-14 playoff loss to the New England Patriots on Saturday because ofastrained quad.
Top5breakout stars of the World Cup
Every4years, the greatest show on earth arrives to take us onamonth long roller coaster ride. Throughout this time, nations become footballing monsters, players become legends. Every World Cup, there comesalot of young players with almost little to no limelight. And some of them leave with the world chanting their […]
Stuart is the ideal man as FAM gen sec, says Hamidin and Windsor
Newly elected Football Association of Malaysia (FAM) general-secretary Stuart Ramalingam is the ideal fit to work alongside president Datuk Hamidin Amin and take Malaysian football forward, opined Asian Football Confederation (AFC) general-secretary Datuk Windsor John Paul. Stuart was handpicked by Hamidin to succeed him as general-secretaryaday after becoming president on July 14, and […]
ဘောလုံးသမား ဘ၀နောက်ကွယ်က ဘ၀နေထိုင်မှု ပုံစံများ – FOX Sports Asia
January 5, 2018 January 6, 2018 Sports News 9
Fox Sports Asia ရုပ်သံလိုင်းကနေ တစ်ချိန်က အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ပြီး အနားယူသွား ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို ဖော်ပြပေးမှာပါ။ ဘောလုံးလောကမှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ဘောလုံးသမား တွေရဲ့ ကစားသမား ဘ၀ဟာ ဂိုးသမားတွေလွဲလို တိုတောင်းတဲ့ ကာလတစ်ခု ကိုသာဖြတ်သန်းကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကစားနေကြတဲ့ နာမည်ကျော်တွေထဲမှာလည်း ရိုနယ်ဒိုနဲ့ မက်ဆီတို့ ဟာလည်း အသက်အရွယ်ပိုင်းအရ အကျပိုင်းကို ရောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဘောလုံးကွင်းမြက်ခင်းပြင်တွေကနေ အနားယူသွားခဲ့ ပြီဖြစ်တဲ့ နာမည်ကျော် တစ်ချို့သူတို့ရဲ့ ဘ၀ကို ဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်နေတယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ ဂျော့ဝိခ်ျ (လိုက်ဘေးရီးယား) (တိုက်စစ်မှူး) ကစားသမားဘ၀မှာတည်က UNICEF ရဲ့ သံတမာန်တစ်ဦးအဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့တဲ့ ဂျော့ဝိခ်ျဟာ ကစားသမား ဘ၀ကနေအနားယူခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ နိုင်ငံရေး […]
Lakshan, Mendis steer Sri Lanka to seven-wicket win
Live Cricket Score – South Africa vs India, 2nd Test, Day 2
Total Video Views: 5026 Kickboxing star Gökhan Saki speaks to …
Amid constant comparisons with his former Barcelona team-mate, the Brazilian’s …
VIDEO: Fenna Kalma's brace sends Ghana crashing
16:33 ShareClose Comments FIFA/Getty Images The Africans crashed out of …
Total Video Views: 696 After meeting withadoula, Brie …
Football salaries: Premier League clubs dominate wages list as Barcelona lead the way
A new study has revealed the sides who pay their …